Zimbabwe Archives - Viral World News, Gossip, Entertainment, Technology, Business And Politics
Zimbabwe dismisses thousands of striking nurses
April 18, 2018 Peter Trump0
Nurses in Zimbabwe went on strike on April 16, 2018 to press the government to pay them allowances and to protest a flawed system for grading salaries. (Photo by thezimbabwenewslive.com) Zimbabwe has fired all nurses who went on strike to demand higher salaries, in a hardline response by the country’s new leadership to growing labor […]
March 18, 2018 Peter Trump0
In this file photo taken on December 14, 2017 Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa delivers a speech during the opening of the 107th annual conference of the Zanu-PF Central Committee at the party headquarters in Harare. (Photo by AFP) Zimbabwe’s first presidential and parliamentary elections since the end of former strongman Robert Mugabe’s long rule will […]
January 19, 2018 Peter Trump0
Zimbabwean senators and members of parliament react after the resignation of then-president Robert Mugabe, in Harare, Zimbabwe, on November 21, 2017. (Photo by AFP) Zimbabwe’s ruling ZANU-PF Party has fired from parliament 11 allies of former leader Robert Mugabe, as President Emmerson Mnangagwa reportedly continues a purge of officials that publicly supported his old boss […]
Zimbabwe gives ousted president Robert Mugabe retirement package
This file photo taken on September 17, 2016 shows then Zimbabwean President Robert Mugabe before the opening ceremony in the Non-Aligned Movement summit in Porlamar, Margarita Island, Venezuela. (Photo by AFP) Zimbabwe’s ousted president Robert Mugabe will get a residence, a car fleet and private air travel as part of a new government-funded retirement package […]
Zimbabwe’s Robert Mugabe visits Singapore hospital for check-up
December 15, 2017 Peter Trump0
Zimbabwe’s former president Robert Mugabe walks out of a lift at the Gleneagles Hospital in Singapore, December 15, 2017. (Photo by AFP) Zimbabwe’s former president Robert Mugabe, who was ousted from power last month, visited a Singapore hospital Friday during a trip to the city-state for a medical check-up. It was the first time he […]
Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa urges public unity to revive ailing economy
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa officiates at the swearing-in ceremony for his cabinet at State House in Harare, Zimbabwe, December 4, 2017. (Photo by Reuters) Zimbabwe’s new president has called for public unity to revive the African country’s ailing economy as his new cabinet took the oath of office. Emmerson Mnangagwa made the appeal after he swore […]
Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa names military figures to cabinet posts
Zimbabwe’s new president, Emmerson Mnangagwa (photo by AFP) Zimbabwe’s new president, Emmerson Mnangagwa, appointed senior military officials to top posts in his new cabinet and chose a veteran cabinet minister to head the finance ministry. Mnangagwa was sworn in as president last Friday after 93-year-old Robert Mugabe quit under pressure from the army. He named […]
Zimbabwe cleric Pastor Evan Mawarire (R) celebrates with his supporters on November 29, 2017 outside the High Court in Harare where he was acquitted of all charges against him including trying to overthrow Zimbabwean government. (Photo by AFP) A Zimbabwean pastor on Wednesday was acquitted of subversion after leading large anti-government protests last year, and […]
Zimbabwe court declares military action against Robert Mugabe ‘constitutional’
November 25, 2017 Peter Trump0
Zimbabwean soldiers are celebrated by citizens in the streets in Harare, on November 21, 2017 after the resignation of President Robert Mugabe. (Photo by AFP) A Zimbabwean high court has ruled that the military action leading to former President Robert Mugabe’s resignation was “constitutional” and not a coup. “Actions by the Zimbabwe Defense Forces to […]
November 24, 2017 Peter Trump0
Emmerson Mnangagwa (C-L) gestures as he arrives at the National Sport Stadium in Harare to be sworn in as Zimbabwe’s president, on November 24, 2017. (Photo by AFP) Emmerson Mnangagwa, a former vice president of Zimbabwe, has been officially sworn in as the country’s new president, days after long-time ruler Robert Mugabe resigned under pressure. […]
This photo taken on June 29, 2008, shows then Zimbabwean president Robert Mugabe swearing in for a sixth term in office in Harare, after being declared the winner of a one-man election. (Photo by AFP) Zimbabwe’s former leader Robert Mugabe has been given immunity to stay in the country as he bowed to increasing pressures and quit […]
November 21, 2017 Peter Trump0
This file photo shows Zimbabwe’s President Robert Mugabe. Robert Mugabe, the aging president of Zimbabwe, who had resisted a military coup and calls for his resignation for almost two weeks, has finally declared his resignation in a letter sent to the country’s parliament speaker. Jacob Mubenda said Tuesday that he had received a letter from […]
This photograph taken on November 19, 2017, shows a television broadcasting Zimbabwe’s President Robert Mugabe delivering a speech in Harare, following a meeting with army chiefs who have seized power in Zimbabwe. (AFP photo) Members of Zimbabwe’s parliament have launched an impeachment motion against President Robert Mugabe as he continues to defy calls for resignation […]
Zimbabwe’s President Robert Mugabe Zimbabwe’s ruling ZANU-PF party says President Robert Mugabe could be impeached within two days as the longtime leader ignored the party’s midday deadline to step down less than a week after the military seized power in the African country. ZANU-PF’s lawmakers began meeting on impeachment plans on Monday, said deputy secretary […]